Explain – ZEUS Myanmar
Breakdown Explain Marvel MCU
ETERNALS frame by frame trailer breakdown
No Comments on ETERNALS frame by frame trailer breakdown
မနေ့ညက Eternals နဲ့ပတ်သက်ပီး Freaturette , Promotion teaser အများကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲမှာ ပါလာတဲ့ Eternals တွေရဲ့ တချို့ scene အသစ်တွေနဲ့ တွေ့ရတဲ့ Ancient Cities တွေ Civilization တွေကို တစ်ချက်လောက် fram by fram Breakdown လေးဖတ်ရင်း ကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ။
ပထမဆုံး Eternals ထဲပြသမဲ့ Civilization တွေကို မပြောခင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ Mesopotamia , Misoamerica , Ancient Peru , Ancient Egypt , Ancient India , Ancient China ဆိုပီး အဓိက လူသားတွေ ယဥ်ကျေးမှု စတင်ထွန်းကားလာတဲ့နေရာကြီး ခြောက်နေရာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေရာတွေထဲမှာမှ Mesoamerica , Mesopotamia , Ancient Peru နဲ့ Ancient India ကို Eternals ထဲမှာ အဓိကပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Eternals တွေက ကမ္ဘာကို နှစ်ပေါင်း 7000 ကျော်လောက်က ရောက်ခဲ့တယ်လို့ သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း သူတို့တွေ့ရတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်ဟာ Neolithic Revolution ဆိုတဲ့ လူမှုယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်မှုရဲ့အခြေခံလို့ ခေါ်လို့ရတဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုတဲ့ age တစ်ခုကိုတော့ စတင်ရောက်ရှိလို့တော့နေပါပီ။
ပုံမှာကြည့်ရတဲ့အတိုင်း Deviant တစ်ကောင်ဟာ ရေထဲကတက်လာပီး human ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အန္တရာယ်ပြုတော့မဲ့ပုံပါပဲ comic အတိုင်းဆို သူ့တို့ deviants တွေရဲ့ ရေအောက်ရောက်သွားတဲ့ Luminia မြို့ကနေ တက်လာတဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ MCU ဟာ comic story နဲ့မတူတက်တော့ Eternals တွေနဲ့ Deviants တွေအတူတူရောက်ရှိခဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Thena နဲ့ Makkari တို့ နှစ်ယောက် cosmic energy နဲ့ suit ကိုပြောင်းဝတ်လိုက်တာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပီး စစချင်းသူတို့ရဲ့ယာဥ်ပျံထဲမှာလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။
ဒီအခန်း ဟာ Babylon ရဲ့ Garden မှာ Ajak တစ်ယောက် ဒုတိယtrailer မှာတွေ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်က cosmic energy orb ကိုထုတ်သုံးပီး တစ်ခုခုကိုကူညီတည်ဆောက်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ Eternals တွေဟာ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ လူသားတွေရဲ့ civilization ကို တိုးတက်အောင်ကူညီရင်း Mesopotamia ဒေသမှာ Babylon Empire ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Babylon မြို့ရဲ့နာမည်ကျော် Istar Gate မှာ deviant တစ်ကောင်တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့ Gilgamesh (Don Lee) ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပီး Strongest Eternals လို့ပြောတဲ့အတိုင်း တစ်ချက်ထဲနဲ့ ထိုးပစ်လိုက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒါကတော့ Eternals ထဲပါမယ့် Aztecs Empire ဖြစ်ပီး Mesoamerica ရဲ့ နာမည်ကျော် architectural ဖြစ်တဲ့ pyramids တွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Aztecs Empire ရဲ့ကျဆုံးမှုဖြစ်ပီး ကလေးမလေးတစ်ယောက် တိုက်ပွဲရဲ့ကြားထဲကို ရောက်နေတဲ့ပုံပါပဲ။
Eternals တွေကို family တစ်ခုအနေနဲ့ချစ်စရာကောင်းစွာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပီး ဒါဟာ အခု present day မဟုတ်ဘဲ Ancient India ရဲ့ Golden Age တင်စားထားတဲ့ အကြွယ်ဝဆုံး Gupta Empire ဖြစ်ပီး သူရဲ့ မြို့တော်ကတော့ Pataliputra ဆိုတဲ့ မြို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ့်ကို ကြီးကြီးမားမား တစ်မြို့လုံး ပျက်စီမှုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပီး Mosopotamia ဒေသရဲ့ မြို့တစ်ခု လို့ပဲ ထင်မိတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ mosopotamia ဆိုတာ မြစ်နှစ်စီးရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ Land တစ်ခုမလို့ပါ ပုံကိုသေချာကြည့်ရင်လည်း မြို့ရဲ့ဘေးက မြစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရမှာပါ။
Makkkari ရဲ့ cosmic power ကိုတွေ့ရမှာပါ. Deviants တစ်ကောင်တိုက်ခိုက်တာကို သူရဲ့ speed ကထွက်တဲ့ Sonic Boom တစ်ခုနဲ့ deviant ကိုဝင်တိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Deviant တစ်ကောင်ကို Ikaris က အရှိန်နဲ့ ဝင်ထိုးလိုက်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။Ikaris ဟာ သူ့ရဲ cosmic eyes beam နဲ့ Deviant တစ်ကောင်ကို လှမ်းပစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရင် trailerမှာတော့ Kro က Thena ကိုဖမ်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပီး အခု အခန်းမှာတော့ Thena က Kro ကိုပြန်တိုက်ခိုက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Makkari နဲ့ Druig တို့ရဲ့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ scene လေးပါပဲ ။
Kingo ဟာ present အချိန်မှာ Bollywood ရဲ့ နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ သူရဲ့ Bollywood Dance scene ကို တွေ့ရတာပဲဖစ်ပါတယ်။
Phasto ရဲ့ အကြမ်းစား weapon creation ကို တွေ့ရမှာပါ. Phasto ဟာ သူ့စိတ်ကူးနဲ့တွေးသမျှ လက်နက်မှန်သမျှကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ယာဥ်ပျံကြီး ကမ်းခြေကို ပျက်ကျလာတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပီး Makkari ဟာ သူ့ရဲ့ super speed နဲ့ Serisi ကို လက်မတင်လေး ကယ်လိုက်တာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Phasto , Seris နဲ့ Thena တို့ကို အတူတူတွေ့ရမှာဖြစ်ပီး ပေါက်ကွဲတော့မဲ့ မီးတောင်ကြီးကို ကြည့်နေကြတာ တွေ့ရမှာပါ သူတို့ရဲ့ဘေးမှာတော့ ပျက်စီးနေတဲ့ သူတို့ယာဥ်ပျံအပိုင်းအစတွေကို တွေ့ရမှာပါ။
London မြို့ရဲ့ညရှုခင်းကို တွေရမှာဖြစ်ပီး Sprite ရဲ့ cosmic energy အစွမ်းနဲ့ Ikaris, Dane Whiteman, Sersi, တို့ကို invisible ဖြစ်သွာအောင် cloaking လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.
Present Day မှာ Eternals တွေက Thena ကို လာခေါ်ကြတာကို တွေ့ရပီး Thena နဲ့ Gilgamesh တို့ ရဲ့ fight scene အနည်းငယ်ကို တွေ့ရမှာပါ
Sprite တစ်ယောက် အပျက်အစီးတွေကြားထဲ တစ်ခုခုကို ဝမ်းနည်းနေတဲ့ပုံပါပဲ. ဒါဟာ ခုနက ပြောတဲ့ valcano ပေါက်ကွဲတဲ့နေရာနဲ့ အတူတူပဲလိုထင်မိတယ်။
Makkari တစ်ယောက် ပင်ကယ်ကမ်းစပ်တစ်ခုမှာ သူတို့ cosmic energy ပုံစံ Map လိုမျိုးအရာကိုကိုင်ထားပီး တစ်ခုခုကို အံသြနေတဲ့ပုံစံပါပဲ။ နောက်မှာလည်း ship ပုံစံ အရာသုံးခုလည်းရှိနေပါတယ်။
Sersi ရဲ့ တစ်ခုခုကို ထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရပါတယ်။ Deviants တွေတော့လည်း ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ thread တစ်ခုတော့ ပါဝင်ဦးမှာပါ။
မီးတောက်တွေရဲ့ ကြားထဲ Thena တစ်ယောက် သူ့ရဲ့လက်နက်ကို ထုတ်ပီး တိုက်ခိုက် ဖို့ အလှဆုံး ခုန်ကူးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆုံးထိဖတ်ပေးခဲ့ကြလို့ ကျေးဇူးပါ။ နောက်ထပ် ပိုကောင်းတဲ့ Content တွေနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။
Eternals ရဲ့ Frame by frame Teaser Breakdown
No Comments on Eternals ရဲ့ Frame by frame Teaser Breakdown
မနေ့ညက #Eternals movie ရဲ့ Team ဆိုတဲ့ promo teaser လေး ၁ ခုထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို video clip ထဲမှာ #Eternals တွေရဲ့ power တွေနဲ့ Battle တွေကို သေချာမြင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ Video clip ထဲမှာပါလာတဲ့ သိရတဲ့အချက်တွေကို ကျွန်တော်နဲ့အတူ frame by frame breakdown ဖတ်ရင်း ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား ခင်ဗျာ…
ပထမ Eternals Trailer Breakdown
စစခြင်း Bollywood star ဖြစ်တဲ့ Kingo ကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထို Scene မတိုင်မီရှေ့မှာလဲ Eternals ၅ ယောက်အတူလမ်းလျောက်နေကြတာဆိုတော့ အရင် Trailer breakdown တုန်းကပြောခဲ့သလိုပဲ ထို scene ဟာ Eternals movie persent timeline ရဲ့ သူတို့တွေ Deviants တွေရန်ကိုပြန်လည်ကာကွယ်ဖို့အတွက် နိုးထလာပြီး လူစစုနေတဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ (နိုးထလာပါပြီ။)
နောက်မြင်ရတာကတော့ Phastos ကြမ်းနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ Trailer တောက်လျောက် Phastos ကို သူတို့ Ship ပြန်ဖော်တာနဲ့ LGBT family ဘာညာကလွဲရင် သေသေချာချာမပြသေးပါဘူး။ အခုတော့ သူ့ရဲ့ Cosmic energy တွေကို ပုံဖော်ပြီးပစ်လိုက်တဲ့ scene ကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။
Phastos ဟာ Comic ထဲမှာဆို 3rd generation eternal တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Eternalတွေအတွက် စစ်လက်နက်တွေ တည်ဆောက်ပြုလုပ်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
ပါ။ သူကိုင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကဂေါ်လွန်းလို့ Greece ခေတ်တုန်းက Olympian god Hephaestus လို့တောင် အထင်လွဲခံခဲ့ရသူလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်မြင်ရတာကတော့ ဘီးကျဲ Ma Dong-Seok ကိုပါ။ ဘီးကျဲက ဒီထဲမှာတော့ Gilgamesh အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီး သူလဲရှေ့ Trailer တွေတုန်းက အားရလောက်အောင်သိပ်မပါခဲ့ပါဘူး။
Gilgamesh ဆိုတာကတော့ Eternal တွေထဲမှာ strength အကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခွန်အားဗလကြီးမားမှုကြောင့် Hercules နဲ့တောင် အမှတ်မှားခဲ့ကြရပါတယ်။
အခု Eternals movie မှာတော့ Gilgamesh ကို Comic ထဲကထက် MCU Version နဲ့မြင်ရဖို့ပိုများပါတယ်။
MCU version ဖြစ်ဖို့များပေမယ့် Gilgamesh Character ဟာ Ma Dong-Seok ကြီးနဲ့တအားကိုလိုက်ဖက်နေလွန်းပါတယ်။
ထို Scene မှာဆို Deviants ကို One Punch ကျွေးသွားတာ အားရစရာကြီးပါ။
နောက်တော့ Makkari နဲ့ Thena ကိုမြင်ရပါတယ်။ Makkari ဝတ်စုံကိုကြည့်ရတာတော့ past timeline ကလို့ ယူဆရပါတယ်။ (မသေချာ)
MCU ရဲ့ Eternals movie ဟာ Run time ၂နာရီ ကျော်နဲ့လာမှာဖြစ်ပြီး Past နဲ့ Present ဆိုပြီး timeline ၂ ခုခွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Makkari ဝတ်စုံ design ကာလာကိုကြည့်ပြီး ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်မြင်ရတာကတော့ Makkari ၁ ယောက် သာလွန် speed နဲ့ ပြေးနေတာပါပဲ။ ထို Scene ကတော့ Present timeline ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို သူမက suit အပေါ်မှာမှ Jacket ထပ်ဝတ်ထားတာမို့ပါ။
Comic ထဲမှာတော့ Makkari ဟာ Male character ဖြစ်ပြီး Superhuman speed ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Speedster တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ The fastest eternal alive ဖြစ်ပါတယ်။
Present timeline ဆိုတာကို Detail ထပ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် သူမစီးထားတဲ့ ဖိနပ်က All star shoes ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
နောက်မြင်ရတာကတော့ ဝံပုလွေပုံစံ Deviants တွေနဲ့ တခြားပုံစံသေချာမပေါ်တဲ့ Deviants တွေ ရေခဲပြင်ကြီးအောက်မှာ ပြေးဝင်လာတဲ့ Scene ကို sec ပိုင်းလေး ပြသွားပါတယ်။
Comic ထဲမှာဆိုရင် Deviants တွေနေတဲ့ pacific ocean အောက်က lemuria kingdom ဆိုတဲ့ နေရာ ၁ ခုရှိပါတယ်။ ထို Scene နေရာပုံစံနဲ့ကျ တူတယ်လို့ဆိုရပေမယ့် တပ်အပ်တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဒါက Deviants တွေကို Eternals တွေနှစ်ပေါင်းများစွာပိတ်ထားတဲ့နေရာလား ဒါမှမဟုတ် Battle အတွင်းမှာမှ ရောက်သွားတဲ့ နေရာလားဆိုတာတွေကတော့ စဥ်းစားစရာပါပဲ။
နောက်မြင်ရတာကတော့ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာမှာ Thena, Seris နဲ့ Phastos တို့ကာကွယ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Comic ထဲမှာတော့ Sersi ဟာ 4th generation Eternal တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Thanosနဲ့ cousin တွေလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Matter Transmutation ဆိုတဲ့ abality ကြောင့် သက်ရှိသက်မဲ့အရာဝတ္တုအားလုံးရဲ့ molecule form တွေကို ထိန်းချုပ်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး သူလုပ်ချင်သလိုလုပ် ပြောင်းလဲပြစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ သူမကိုစုန်းမတစ်ယောက်လို့တောင် ထင်မှတ်ကြရပါတယ်။
အဲ့မှာ Sersi ရဲ့နောက်ထပ် ၁ ကွက်ကိုထပ်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ ချော်ရည်ခဲတုန်းကြီး သူ့စီပစ်ဝင်လာတာကို လက်နဲ့တားပြီး ငှက်ခလေးတွေအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပါ။ ဒီ scene ကိုမြင်တော့ Infinity war မှာ Thanos ပြစ်လိုက်တဲ့ beam ကို Doctor Strange ၁ ယောက် လိပ်ပြာလေးတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တဲ့ scene ကို သတိရစေပါတယ်။
နောက်ဆုံးမြင်ရတာကတော့ Phastos ရဲ့ခလေးကိုထိန်းနေတဲ့ မမ Angelina Jolie (Thena) ရဲ့ ညှင်သာတဲ့ baby sitter moments လေးနဲ့အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
Phastos: “မင်းရဲ့ ခလေးထိန်းရမယ့် အထူးအခွင့်အရေးကို ပြန်ရုတ်သိမ်းပါပြီ။” 😆
အဆုံးထိဖတ်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးပါ။ နောက်ထပ် Content အသစ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။
What If? Episode4(Breakdown)
No Comments on What If? Episode4(Breakdown)
မနေ့ကနေ့လည်ကပဲ What If Episode4ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအပိုင်းကတော့ ရေရေလည်လည်ကို မိုက်တဲ့ episode တစ်ခုလည်းဖြစ်သလို Dr.Strange2အတွက်လည်း အနည်းငယ် tease သွားပါသေးတယ်။
ဒီတော့ ဒီ အပိုင်းထဲမှာပါတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်တွေနဲ့
easter eggs လေးတွေကို breakdown လုပ်ပေးသွားပါမယ်။
တကယ်လို့ Episode4ကို မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင် အောက်က link ထဲ ဝင်မဖတ်ပါနဲ့ဦး ။ Spoiler တွေများစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရင်သွားကြည့်ပြီးမှ ပြန်လာဖတ်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ် ။ ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ link ကို နှိပ်ပြီး ဝင်ဖတ်နိုင်ပါပြီ ။
ပိုပြီး Romantic ဆန်လာတဲ့ Strange
Episode ရဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ Dr.strange ဟာ သူ့ချစ်သူ Dr.Palmer ကို ကားနဲ့ လာခေါ်တာကနေ အစပြုထားပါတယ် ။
ဒီအခန်းမှာ ထူးဆန်းနေတဲ့အချက်ကတော့ Strange က 2016 movie ထဲကလိုမဟုတ်ဘဲ တအားကြင်နာတတ်လာပြီး romantic ဆန်တဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ် မြင်တွေ့ရတာပါပဲ ။
2016 movie တုန်းက Strange ကတော့ Romantic ဆိုတာလည်း ဘာမှန်းသိပုံမရတဲ့ အပြင် သူ့တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေ knowledge တွေ နဲ့မာနကြီးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ ။ ဒါ
ကြောင့်ပဲ Dr.Palmer ကတောင် သူ့ဆီက စိတ်ဆိုးပြီး ထွက်သွားခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒီ what if? မှာတော့ movie ကနဲ့ မတူဘဲ Strange ကို မတူညီတဲ့ version အဖြစ် မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလို Strange ရဲ့ ပုံစံက Romantic ဆန်နေတာကြောင့်ပဲ Dr.Palmer က Strange နဲ့အတူ event တက်ဖို့ လက်ခံခဲ့တာပါ ။ တကယ်တမ်း movie ထဲမှာတော့ Strange က သူနဲ့အတူ event တက်ဖို့ Dr.Palmer ကို ခေါ်တဲ့အခါမှာ ငြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
Sorcerer Supreme ဖြစ်လာခြင်း
ဒါကတော့ ထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူး ။ Movie ထဲက scene တွေကို revisit တဲ့အနေနဲ့ ပြန်ပြလိုက်တာပါပဲ ။
Strange တစ်ယောက် စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လျှောက်သွားရင်း
Kamar-Taj ရောက်တယ်… ဒီနောက် Ancient One နဲ့ တွေ့ပြီး Mystic Arts တွေကို လေ့ကျင့်တယ်.. Eye of Agamotto ကို သုံးဖို့ ကြိုးစားတယ်.. နောက်ဆုံး Dormammu ကို အနိုင်ရပြီး Sorcerer Supreme ဖြစ်လာတယ် ။ ဒါပါပဲ ။
မတူတဲ့အချက်တွေကတော့ ဒီ What if? မှာ သူ့လက်တွေ သုံးမရတော့လို့ kamar-taj ရောက်လာတာမဟုတ်ဘဲ သူ့ချစ်သူ
ဆုံးသွားလို့ လွမ်းဖျားလွမ်းနာကျပြီး ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ။
နောက်ပြီး ဒီ what if? universe က Kamar-Taj မှာ Karl Mordo ကိုလည်း မတွေ့ရပါဘူး။
Sorcerer Supreme ဖြစ်လာပေမယ့်လည်း Strange ကတော့ သူ့အတိတ်ကို မမေ့ပျောက်နိုင်သေးပါဘူး ။ ဒါကြောင့်
time stone ကို သုံးပြီး သူ့ချစ်သူကို သွားပြန်ကယ်ပါတယ် ။
ပြန်ကယ်တိုင်းလည်း တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ပြန်သေတာပါပဲ ။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားကြိုးစား Strange ရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေက အရာမထင်ပါဘူး ။
ဒါက ဘာကို သွားသတိရစေလဲဆိုတော့ တစ်ချိန်က ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ Final Destination ဇာတ်ကားတွေကိုတောင် သွားမြင်ယောင်မိပါတယ် ။ အဲ့ကားတွေမှာဆိုရင်လည်း main character က လူတွေရဲ့ သေခြင်းကို ကြိုမြင်နိုင်တဲ့အတွက် တားဆီးဖို့ ကြိုးစားပေမယ့်လည်း လူတွေကတော့ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ သေကုန်ကြတာပါပဲ ။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲနဲ့တောင် auto သေတာပါ ။ အဓိက ပြောချင်တဲ့ ဆိုလိုရင်းကတော့ သေကံ ပါလာရင် သေမှာပါပဲ ။ ဘယ်လောက်ပဲ စွမ်းအားကြီးတဲ့ လူဖြစ်ပါစေ သေခြင်းတရားကိုတော့ ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။
Absolute Point of Time
The Ancient One က Strange ကို ပြောခဲ့တဲ့ Absolute Point of Time ဆိုတာကတော့ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် What if? ကို ပြောတာပါပဲ ။ Butterfly Effect ဆိုတာကို ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်သေးသေးလေးတစ်ခုကနေ အရမ်းကြီးမားတဲ့ event ကြီးတွေအထိပါ ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ science theory တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီမှာဆိုရင်လည်း ဒီလိုပါပဲ ။ တကယ်လို့သာ Dr.Palmer သာ မသေခဲ့ရင် သို့မဟုတ် movie ထဲကလို Strange ရဲ့ လက်တွေကိုသာ မဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင် Strange က ဘယ်တော့မှ Sorcerer Supreme တစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလို
Time stone ကိုင်ဆောင်သူလည်း ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ သာမန် ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့သာ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုပဲ Infinity War တုန်းက Thanos သာ snap မလုပ်ခဲ့ရင်လည်း loki လည်း tva ကို ဘယ်တော့ကမှ ရောက်သွားမှာမဟုတ်သလို Wandavision တို့ Falcon and the Winter Soldier တို့ No Way Home တို့လည်း ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး ။ ဒီတော့ Thanos Snap ကလည်း ဖြစ်ကို ဖြစ်လာရမယ့် Absolute Point of Time တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ point of time တွေကို ဘယ်လောက်ပဲ စွမ်းအားကြီးတဲ့သူဖြစ်ပါစေ ပြန်ပြင်လို့မရနိုင်ပါဘူး ။ ပြန်ပြင်လိုက်တာနဲ့ timeline တွေ အများကြီး ကွဲထွက်ကုန်ပြီး multiversal war ကြီးဖြစ်ကာ universe ကြီးတစ်ခုလုံး
Strange တစ်ယောက် Ancient one ပြောတာတွေကို
နားမထောင်ဘဲ Absolute Point of Time ကို ချိူးဖျက်ဖို့အတွက် Cagliostro ရဲ့ စာအုပ်ကို သွားရှာတဲ့အခါမှာ
စာကြည့်တိုက်စောင့်ဖြစ်တဲ့ O-Bengh ဆိုသူနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ် ။
တကယ်တော့ O-Bengh က မှော်ဆရာ Cagliostro ကိုယ်တိုင်ပါပဲ ။ comic ထဲအရဆို Cagliostro ရဲ့ မှော်ဆရာဖြစ်မလာခင် နာမည်အရင်းက O-Bengh ဖြစ်ပါတယ်။
Library ထဲမှာ Cagliostro ရဲ့ စာအုပ်ကို Strange ရှာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ Movie ထဲက Kaecilius ခိုးသွားတဲ့ Cagliostro စာအုပ်နဲ့ cover ချင်းအတူတူဖြစ်နေတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ် ။ animation မှာတောင် Marvel ရဲ့ အသေးစိတ်က အစ detail ကျနိုင်မှုကိုတော့ သဘောကျမိပါတယ် ။
နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ စာအုပ်ကို လှန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ movie ထဲက Kaecilius ခိုးသွားတဲ့ စာရွက်တွေထဲက တစ်ရွက်ကို မြင်တွေ့ရပါတယ် ။ အဲ့ဒါကတော့ Dark dimension ကနေ energy ကို စုပ်ယူနိုင်တဲ့ ritual ကို ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီ universe မှာ Kaecilius က Cagliostro စာအုပ်ကို ဘယ်တုန်းကမှ မခိုးသွားခဲ့ကြောင်းကို
ပြနေပါတယ် ။ ဒါမှမဟုတ် Kaecilius က ဘယ်တုန်းကမှ မှော်ပညာကို မလေ့ကျင့်ခဲ့ဘဲ ဒီ universe မှာ သာမန်လူအဖြစ်သာ နေနေခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
Absolute Point of Time ကို ဖျက်ဖို့အတွက် mystic beings တွေကို ဆင့်ခေါ်ရာမှာတော့ Episode 1 တုန်းကမြင်ခဲ့ရတဲ့ monster ကြီးကို ပြန်လည်မြင်တွေ့ရပါတယ် ။ ဒါကတော့ comic books တွေထဲက Dr.strange ရဲ့ ရန်သူကြီး Shuma-Gorath ဖြစ်လောက်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။
ဒီကောင်ကြီးကလည်း DS2 မှာ ပါမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတော့ What if? ထဲမှာထဲက ကြို tease ထားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဒီအပိုင်းမှာ Strange က monster ကြီးရဲ့ လက်တံတွေကို ဖြတ်လိုက်ပြီး သူ့စွမ်းအင်တစ်ချိူ့ကို သူ့ကိုယ်ထဲ စုပ်ယူလိုက်တာကြောင့် episode 1 တုန်းက monster ကြီး weak သွားတာက Strange ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Karl Mordo ၏ ရည်ရွယ်ချက် ?
Mystic Beings တွေဆီက Magic Power တွေကို Strange စုပ်ယူနေတာဟာ Dr.strange solo movie credit scene ထဲက Karl Mordo ကိုတောင် အမှတ်ရမိစေပါတယ် ။
movie ထဲက Karl Mordo ဟာဆိုရင်လည်း kamar-taj ကို လာခဲ့ဖူးတဲ့ သူတွေဆီက magic energy တွေကို ပြန်စုပ်ယူနေတာကို မြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီ episode က Strange Supreme ဟာ Karl Mordo ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းကို tease ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ တခြားသူတွေဆီက energy တွေကို စုပ်ယူပြီး evil ဖြစ်လာမယ့် Mordo ဟာ DS2 မှာလည်း ပြန်ပါဝင်သွားဖို့ confirm ထားပါတယ် ။
Strange ဟာ past ကို သွားပြီး Dr.Palmer ကို ကယ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစားတဲ့အပြင် Ancient One တားနေတဲ့ကြားက Absolute Point of Time ကို ချိူးဖောက်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ် ။ ဒီတိုင်းသာ ဆက်သွားမယ်ဆို Strange ကို ဘယ်သူမှ
မတားနိုင်တော့ဘဲ universe ကြီးတစ်ခုလုံးကို ပျက်စီးစေမယ့်
chaos တွေ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပါ ။ ဒါကြောင့် Ancient One ဟာ Strange ကို Strange ပဲ ပြန်တားနိုင်မယ်လို့ ယူဆပြီး
universe တစ်ခုထဲမှာပဲ အတိတ်နဲ့ ပစ္စုပ္ပန် timeline နှစ်ခု ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ် ။ ပုံမှန်ဆို ဒီလိုကွဲထွက်မှုအတွက် TVA က
လာဖမ်းရမှာပါ ။ ဒါပေမယ့် ဘာမှ ဖြစ်မလာတဲ့အတွက် ဒီ series က loki series နောက်ပိုင်းလို့ ယူဆလို့ရပါတယ် ။
ဒါကိုတော့ အားလုံးလည်း သိပြီးလောက်မှာပါ ။
ထို့နောက်တော့ Present က Strange ကို Ancient One က Projection လွှတ်ပြီး လာသတိပေးပါတယ် ။ တစ်ဖက်မှာလည်း O-Bengh ပြောလို့ Strange Supreme ကလည်း
Present က Strange ကို တည်ရှိမှုကို သိသွားပြီး လာရှာပါတယ် ။
Another Same Characters Battle
ဒါကတော့ အခု နောက်ပိုင်း phase တွေမှာ MCU အသုံးများလာတဲ့ ဇာတ်ကွက် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ တူညီတဲ့ ဇာတ်ကောင်
တစ်ကောင်နဲ့ သူ့ရဲ့ counterpart တို့ fight ကြတဲ့ scene တွေပေါ့ ။ ဒီ Episode မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ Dr.Strange နှစ်ကောင် ဖိုက်ကြပါတယ် ။ Fight scenes တွေကတော့ တော်တော်ကြီးကို အားရဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ ရှယ်ပါပဲ ။
MCU saga တစ်လျှောက် Same Characters Battle တွေ ကျွန်တော် မြင်မိသလောက်ကတော့
Captain America vs Captain America (Endgame)
Nebula vs Nebula (Endgame)
Vision vs White Vision (Wandavision)
Loki vs Other Loki variants (Loki) နဲ့
Dr Strange vs Strange Supreme (What if…?)
Strange Chaos Magic များ သုံးလိုက်သလား ?
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ Strange နှစ်ယောက် တစ်သားတည်းဖြစ်သွားပြီး Dr.Palmer ကို အသက်ပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာ Strange သုံးတဲ့ magic အရောင်က နီညိုရောင်
ဖြစ်နေပါတယ် ။ ဒါဟာ Scarlet Witch ရဲ့ magic အရောင် နဲ့ သွားဆင်နေပါတယ် ။ Strange တို့ များသောအားဖြင့်
အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ လိမ္မော်ရောင် magic ဟာ Eldritch Magic ဖြစ်ပြီး Reality ကို စိတ်တိုင်းကျ မပြုပြင်နိုင်ပါဘူး ။
Reality ကို လိုသလို control နိုင်တဲ့ magic ဆိုလို့ Marvel မှာ magic အမျိူးအစား တစ်မျိူးပဲ ရှိပါတယ် ။
အဲ့ဒါကတော့ Chaos Magic ပါ ။ ဒါပေမယ့် Chaos Magic ဟာ Reality ကို bend လိုက်တိုင်း cosmic ထဲမှာ chaos force တွေကို ဖြစ်စေပြီး ပျက်စီးမှုတွေကို ယူဆောင်လာစေပါတယ် ။ ဒီတော့ Strange Supreme ဟာ chaos force တွေ အများကြီး ကို ထုတ်လွှင့်မိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
universe ကြီးတစ်ခုလုံး ပျက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ် ။
What if? မှာ Dr Strange ရဲ့ role အဆုံးသတ်သွားပြီလား ?
အဖြေကတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ trailer ထဲအရဆို Captain Carter က Strange Supreme ရှိနေတဲ့ Mirror Dimension ထဲ ရောက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ် ။ ပြီးတော့ t’challa star lord တို့ captain carter တို့လည်း တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာ ပေါင်း တိုက်နေတာတွေ့ရတာအတွက် What if? Final Episode မှာ အရင်အပိုင်းတွေက characters တွေအကုန်ပေါင်းပြီး Guardians of The Multiverse ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။
Strange Supreme ကလည်း အခုချိန်မှာ နောင်တတွေရပြီး
လူကောင်းစိတ်ဝင်နေပြီဆိုတော့ နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ hero တစ်ယောက်အဖြစ် ပြန်မြင်ရဖို့ များပါတယ် ။ အစထဲကလည်း evil ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ အချစ်ကြောင့် စုံလုံးကန်းပြီး villain လိုလို ဖြစ်သွားခဲ့တာဆိုတော့ ပြန်လူကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါသေး တယ် ။ အခန့်မသင့်ရင်တော့ strange ကို သွားခေါ်တဲ့အခန်းမှာ
captain carter တရားချလိုက်လို့ redemption ဝင်ပြီး hero တွေနဲ့ လာပေါင်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်မှာပါ ။ ဘာဖြစ်မလဲကတော့ အတိအကျ ပြောမရသေးပါဘူး။
အချိန်ပေးပြီး အဆုံးထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ။
နောက်ထပ် breakdown တွေ review တွေ comic facts တွေနဲ့ ပြန်လာခဲ့ပါမယ် ။
Thanks for Reading,Guys!
Continue reading “What If? Episode4(Breakdown)”
DC Explain Movie
The Suicide Squad (2021) – Breakdown And Ester Eggs
No Comments on The Suicide Squad (2021) – Breakdown And Ester Eggs
ထွက်ရှိထားတာသိပ်မကြာသေးတဲ့ the Suicide Squad flim မှ Ester eggsများနှင့် Detailတစ်ချို့ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
The Suicide Squad (2021) ကြည့်ပြီးသွားသူများသာဖတ်ပါ။
Same Bird Race
ဇာတ်လမ်းစစချင်းတွင် Micheal Rooker ကြီးရဲ့ Savant ဟာဘောလုံးကစားပြီး ငှက်ကိုသတ်လိုက်တာတွေ့ရမှာပါ။
အဲ့နောက်မှာ island မှာ team 1နဲ့ပါသွားချိန် ပလပ်ကျွတ်ပြီး ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာ ရေထဲမှာဖောက်ခွဲသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
2 Roles Of Sean Gunn
Director James Gunn ရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ Sean Gunn ဟာ MCU fan တွေအနေနဲ့သိပ်မစိမ်းလှပါဘူး။
Guardian of the Galaxy တွင်လည်း Yondu နှင့်အတူ Revengers အဖွဲ့တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး ယခု Suicide Squadတွင် ပါဝင်လာပါတယ်။
ပထမ role ကတော့ Calendar Man ဆိုတဲ့ Batman Villain Role ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ Serial Killed Weasel role ကိုလည်းသူပဲသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Calendar Man နှင့်အတူထပ်မံတွေ့ရတဲ့ Villainကတော့ Double Down ဆိုတဲ့ Villainပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူရဲ့ Abilitiesကတော့ skin shape formingဖြစ်ပြီး skin ကိုခွာယူကာ ဖဲချပ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
David Ayerရဲ့ Suicide Squad တွင် Harley Quinn ဝတ်တဲ့ jacketနှင့်ယခု James Gunn Suicide Squadတွင်မူ Harley Quinnဝတ်တဲ့ jacketမတူတာကို တော့ တော်တော်သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Suicide Squad (2016) တွင် Property of the joker ဆိုပြီး joker နဲ့ break up မလုပ်ခင်လေးမှာ ဒီလို ro ခဲ့ပါတယ်။
ယခု Suicide Squadတွင်မူ live fast , die clown ဆိုပြီးပြောင်းထားပါတယ်။
Kaleidoscope (Villain Of Superboy)
ထို့နောက်ထောင်ထဲတွင် Superboyရဲ့ Villain တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kaleidoscope ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ သူမကို cameo အနေနဲ့ထည့်ထားပေမဲ့ future DCEU Movieတွေမှာထပ်တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
Pok-ka Dot Man ဟာအကုန်လုံးကိုသူ့အမေလို့မြင်တဲ့အခန်းကိုတွေ့မိမှာပါ။ သေသေချာချာကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ Rat Catcher2ရဲ့ကြွက်ကိုတောင် မျက်မှန်နဲ့သူ့အမေလို့မြင်တဲ့အထိ တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
James Gunn Mentor Cameo
James. Gunn ရဲ့Mentor ဖြစ်တဲ့ Lloyd Kaufman ကို Guardian of the Galaxy Vol.1 က အာကာသထဲမှ ထောင်တွင်လည်း cameo တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ယခု suicide Squadတွင်လည်း Peace Maker Bar ထဲဝင်သည့်အချိန်တွင်အနောက်တွင် cameo အနေနှင့်ထပ်မံထည့်ထားပါတယ်။
Peace Maker ရဲ့ဦးခေါင်းမှ ဦးထုပ်ကို Bloodsport မှ အိမ်သာခုံနှင့်တူတယ်လို့ပြောတဲ့အခန်းကိုမှတ်မိမှာပါ။
ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ Bloodsport ဟာ ထောင်ထဲမှအိမ်သာတွေ စားပွဲခုံတွေကိုဆေးတဲ့အခါ peace Maker ရဲ့ဦးထုပ်နဲ့ တူတဲ့ အိမ်သာထိုင်ခုံကိုပထမဆုံးဆေးခဲ့ရလို့ အရောင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်တူတဲ့ peace Maker helmet ကိုတွေ့တော့ toilet seatဆိုပြီးပြောင်လိုက်တာပါပဲ။
Emoji Languages Text
ထို့နောက်တွင် Harley Quinn အဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာ ကြိုးတုပ်ထားပြီး အစောင့်ကစာရိုက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
ဘာလုပ်နေလဲလို့ တစ်ဖက်ကမေးတဲ့အခါမှာ emoji Languagesနဲ့ text ပြီး Harleyကို နှိပ်စက်မလို့ဆိုပြီး ပို့တာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အနီးကပ်ကြည့်တဲ့သူတွေတွေ့မြင်ရမှာပါ။
Mantis Cast Cameo
James Gunn ပြောတဲ့ Suicide Squadမှာပါတဲ့ GOTG က unknown cast က တော့ Mantis Role သရုပ်ဆောင်တဲ့ pom Klementieff ပဲဖြစ်ပါတယ်။ suicide Squad team2bar ထဲဝင်သွားချိန်မှာ ကနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲကအလယ်ကတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Pol-Ka Dot Man ဟာ သူဖြစ်တဲ့ Superhero momentလေးတစ်ခုရပြီးမှသေသွားခဲ့ရတာပါ။ သူ့အမေဟာသူတို့ ညီအကိုတွေကို Star Lab မှာ စွမ်းအားရအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ failureဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုမှာသူဟာ သူရဲကောင်းဆန်ဆန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရပါမယ်။
အားမရတဲ့အချက်က captain boomerangကိုလည်းဒီလိုအဆုံးသတ်မျိုးဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါပဲ။
Starro Even Not A Villain
Starro ကြီးက ဒီ Suicide Squadမှာ Villain မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျ။ သူ့ဖာသာ space ထဲအေးဆေးလွှင့်နေတဲ့ အကောင်တစ်ကောင်ကို လူသားတွေကပဲ ခြေမငြိမ်လက်မငြိမ်သွားဖမ်းပြီးနောက်မှာ Harm ဖြစ်တာသိတော့ စမ်းသတ်ဖို့တတ်တခိုးလေးကြံပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြီးလာအောင်လုပ်ပြီး စွမ်းအားတွေကို‌‌လေ့လာခဲ့ကြတယ်။ starroက earth ကို ကျူးကျော်ဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ဖာသာ အာကာသထဲမှာကြယ်တွေကြည့်ပြီး လွှင့်မျှောနေခဲ့ယုံလေးပါပဲ။
နောက်ထပ် Content အသစ်များနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါ့မယ်။
Explain Movie Movie Review
Kingdom: Ashin of the North ( Explained )
No Comments on Kingdom: Ashin of the North ( Explained )
2021 မှာပဲ Netflix ကနေပီးတော့ Kingdom season 1 နဲ့2တို့ဖြစ်လာရတဲ့ Origin ကိုပြသဖို့အတွက် Kingdom: Ashin of the North ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ Origin ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Ashin အကြောင်းနဲ့ ဂျိုဆွန်ကလူတွေ Zombie ပိုးကူးစက်သွားရတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးထားတယ်။ တချို့ Kingdom Series နဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို အချိတ်အဆက်မမိတဲ့သူတွေအတွက်နဲ့ Ashin of the North ကိုသိပ်နားမလည်တဲ့ လူတွေအတွက် Movie Explained လေးလုပ်ပေးထားပါတယ်။
1. Ashin and Seongjeoyain
Ashin အကြောင်းကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုရင် Ashin တို့က တရုတ်ပြည်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ လူမျိုးနွယ်စုတစ်ခုထဲကကောင်မလေးပါ။ မွန်ဂိုတွေ တရုတ်ပြည်ကိုသိမ်းတော့ ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ ကိုရီးယားကို လာဝင်ခိုရာကနေ ကိုရီးယားဘုရင်က သူတို့အတွက်နယ်မြေလေးတစ်ခုကိုပေးထားတာပါ။ ကိုရီးယားမှာ နေလာတာ ရာစုနှစ်လောက်ကြာလာတဲ့ အချိန်မှာ ဂျိုဆွန်ကလည်းမဟုတ် ဂျာချန်ကလည်းမဟုတ်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ Seongjeoyain လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဂျိုဆွန်ကလူတွေကတော့ Ashin တို့တွေကို ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ပဲ သတ်မှတ်ထားပြီး အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်တွေကိုပဲ လုပ်ခိုင်းထားပါတယ်။ Ashin ရဲ့အဖေဆို သားသတ်သမားဆိုပြီး ဂျိုဆွန်က လူတွေနှိမ်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ။
Ashin ရဲ့အဖေကဦးစီးပီး တည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ ရွာလေးကိုတော့ Boundary Village လို့ခေါ်ပါတယ်။
3. Pajeowi and Pyesa-Gun
မကြာခင်မှာပဲ ပဂျာဝီလူမျိုး( ပါဂျာဝါ မြစ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာ စခန်းဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးနွယ်စု) တွေရဲ့ စခန်းကို Ashin ရဲ့အဖေကို ဂျိုဆန်ရဲ့ စပိုင်အနေနဲ့ စေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ တောနက်ကြီးထဲမှာ သေနေကြတဲ့ လူတွေက ပဂျာဝီတွေပါ။ သူတို့ရဲ့ စခန်းအတွက် ဆေးစုဆောင်းဖို့ Pyesa- gun တောထဲမှာ ဂျင်ဆင်းလာရှာကြတာပါ။ ဂျိုဆွန်ကလူတွေကဖုံးဖိပြီး ကျားကသတ်လိုက်တာလို့ပြောကြပေမယ့် ပဂျာဝီတွေက အမှန်တရားကိုသိသွားကြပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ပဲ ပဂျာဝီလူမျိုးတွေက အညှိုးထားပြီး Ashin ရဲ့ အဖေကို မုန်းတာကြောင့် Ashin အဖေကိုချုပ်ပြီး Ashin တို့တစ်ရွာလုံးကိုသတ်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ Ashin အဖေကို Spy လုပ်ခိုင်းတဲ့သူကလည်း Kingdom Season 1 ရော2ရောမှာ Villains တွေဖြစ်ကြတဲ့ Cho Clan ကလူတွေပါပဲ။
4. Ashin and Chupajin
အသက်တွေကြီးလာတော့ Ashin ကလည်း သူနေတဲ့ ချူပါဂျင်း စခန်း( ဂျာချန်းလူမျိုးတွေကို ခုခံဖို့ဆောက်ထားတဲ့စခန်း) အတွက် ပဂျာဝီစခန်းကို သွားပြီး Scout လုပ်တာကနေ သူ့အဖေအကြောင်းနဲ့ တရွာလုံးအကြောင်းသိသွားပြီး ဂျိုဆွန်စခန်းတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါတယ်။
5. Resurrection Plant
Ashin ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ သူ့တရွာလုံးကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဂျိုဆွန်နဲ့ ပဂျာဝီကလူတွေကိုလည်း မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ချင်တာပါ။ အဲ့တာကြောင့်လည်း သူမအမေနေမကောင်းတုန်းက သူမရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ Resurrection plant ကိုဂျိုဆွန်ရဲ့ ရာထူးကြီး အမှုထမ်းတွေဆီမှာ လိုက်ရောင်းပါတယ်။ ရောင်းနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ သူမက အဲ့အပင်အကြောင်းကို သူ့ရွာက အလောင်းတွေရဲ့ စမ်းသပ်ချက်အရ တော်တော်သိနေပါပြီ။
ဇာတ်ကားရဲ့ အဆုံးသတ်မှာ Ashin ကပဂျာဝီတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကိုသွားသတ်တဲ့အခန်းတွေ့ရမှာပါ။ လေးနဲ့မြားမှာတော်တဲ့ Ashin အနေနဲ့ ပစ်မလွဲပဲ အကုန်သတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရမှာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် Ashin ကအဲ့မှာတင်မရပ်သွားပါဘူး။ Zombies တွေကိုထိန်းချုပ်ပြီး လူတွေထပ်သတ်ပါတယ်။ Kingdom Season2အဆုံးမှာ အဲ့တာကြောင့် Ashin ရယ် Resurrection plant ရဲ့ အစကိုလိုက်ရှာနေကြတဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသားရယ် ဆိုဘီရယ်ကိုအဖွဲ့ သွားဆုံတာကိုမြင်ကြရမှာပါ။
အဲ့တာတွေကြောင့် Season3မှာလည်း Ashin က Main Villain ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ Season 1 နဲ့ Season2က Zombie ဖြစ်ရပ်တွေစခဲ့တာကလည်း Ashin ကအဲ့အပင်ကို အမှုထမ်းတွေကို လိုက်ရောင်းခဲ့တာကနေစခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
အောက်မှာတော့ Kingdom: Ashin of the North ကနေရာလေးတွေရဲ့ ရှင်းပြချက်ကိုရေးပေးထားပါတယ်။
မွန်ဂိုတွေ တရုတ်ပြည်ကိုသိမ်းတော့ ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ ကိုရီးယားကို လာဝင်ခိုရာကနေ ကိုရီးယားဘုရင်က သူတို့အတွက်နယ်မြေလေးတစ်ခုကိုပေးထားတာပါ။ ကိုရီးယားမှာ နေလာတာ ရာစုနှစ်လောက်ကြာလာတဲ့ အချိန်မှာ ဂျိုဆွန်ကလည်းမဟုတ် ဂျာချန်ကလည်းမဟုတ်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ သူတို့ကိုတော့ Seongjeoyain လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
ပဂျာဝီလူမျိုး( ပါဂျာဝါ မြစ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာ စခန်းဆောက်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးနွယ်စု)
ဂျိုဆွန်လူမျိုးတွေ ဂျာချန်တွေရန်ကကာကွယ်ဖို့ လုပ်ထားတဲ့စခန်းပါ။
Resurrection Plant အကြောင်းရေးထားတဲ့ Boundary Village အနောက်က ဂူတစ်ခုပါ။
သေသောသူကိုအသက်ရှင်အောင်ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Zombie plant လို့ခေါ်ပါတယ်။